Ndị na-eto eto nduku na ndịda Ukraine enweghị ike ire ihe ubi ha - magazin "Potato System"
Isi News Akụkọ ụwa
Ndị na-eto eto nduku na ndịda Ukraine enweghị ike ire ihe ọkụkụ ha
в Akụkọ ụwa, News
Nke a ka ekwuputara na ozi nke Ulo ahia Horticultural nke Ukrania UHBDP.
“Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga resellers zụtara nduku maka 5 UAH, mgbe ahụ ná ngwụsị izu ọ dịghị onye were ha ma ọlị. Nsukka nke Kherson na Zaporozhye mpaghara mkpesa banyere ọnọdụ a, ”ozi na-ekwu.
Dị ka ndị ọkachamara na-akọwa, ihe kpatara ya bụ àgwà adịghị mma nke poteto: n'ihi ọnọdụ ihu igwe, oke mmiri ka akọrọ ihe na tubers anaghị emezu ụkpụrụ ahụ. Nduku kwusi ngwa ngwa, ogbenye mma nduku na-emetụta ya Idebe mma. Ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ iji poteto ochie, ọ bụ ezie na ha dị oke ọnụ, ha dị mma.
“Ke adianade do, a oge na Ukraine ji mara overproduction nke nduku na-eto eto, na ọjọọ ihu igwe ọnọdụ mere ka a mbido mbubreyo. N'ihi ya, inine si Azerbaijan na Russia weghaara "nri nke abụọ" nke Ukraine na ahịa nduku Belarus. Ma na usoro nke ngwaahịa mma na-eri, Ukraine na-eto eto nduku ugbu a bụ asọmpi, ”ngo na-agbakwụnye.
Achọpụtakwara na ndị nrụpụta Ukraine n'ozuzu ha enweghị ohere ịme mgbanwe na ahịa ma gbanwee ngwa ahịa ahịa ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ha enweghị ndebanye aha gọọmentị ma ha enweghị ike ịrụ ọrụ site na mbufe ụlọ akụ.
Tags: n'oge ndukuUkraine
Uzbekistan malitere mmemme nchekwa afọ ise
Ọnọdụ nke ịgbazinye ego ọkacha mmasị na ụlọ ọrụ agro-ụlọ ọrụ nwere ike sie ike
Raiffeisenbank nyere ego maka ijeri rubles 9 McCain Nri